Akụkọ - Mmalite nke ose grinder
Peugeot bụ n'ezie aha nna French. Ezinaụlọ Peugeot malitere imepụta igwe nri dị iche iche na -esi nri n'oge narị afọ nke 18. “Ụlọ ọrụ Peugeot” nke mepụtara ose na -ama jijiji mere ka ọtụtụ mmadụ nwute n'ihi aha ụlọ ọrụ ụgbọ ala Peugeot nke France. Ọ bụ otu ihe ahụ. N'ezie, ma ndị na -asacha ose Peugeot na ụgbọ ala Peugeot bụ otu ụlọ ọrụ. Peugeot bụ onye mbụ wepụtara igwe nsị. Ọ dịghị onye chere na ụlọ ọrụ a ga -emepụta ụgbọala n'oge ahụ. Ezinaụlọ Peugeot etinyela aka n'ichepụta ihe karịrị afọ 200. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, ha buru ụzọ mepụta igwe ihe na -esi nri. N'ihe dị ka 1810, ha chepụtara ma mepụta igwe kọfị, igwe ihe ose, na igwe igwe nnu. Ka oge na -aga, ha malitere imepụta ịnyịnya ígwè, wiil ndị na -agba ịnyịnya, okpokolo agba ọla, na ụlọ nrụpụta uwe. Site na 1889, ha nọ n'ime ezinụlọ. Onye otu aha ya bụ Armand Peugeot na German Gottlieb Daimler jikọrọ aka mepụta ụgbọ ala nwere ụkwụ atọ, nke bụ n'ezie ụgbọ ala nke uzuoku na-akwagharị. Nke a ji nwayọọ nwayọọ hibe ụlọ ọrụ ụgbọ ala Peugeot, Daimler jikọrọ aka na ezinụlọ Mercedes-Benz nke German wee mepụta Daimler-Benz.
Akụkọ ihe mere eme nke igwe ihe ose na -ebu ụzọ karịa akụkọ ihe mere eme nke ụgbọala. Ọ bụ ụmụnne abụọ nke ụlọ ọrụ a haziri onye na -egwe ose. A na-akpọ otu Jean-Frederic Peugeot (1770-1822) na nke ọzọ a na-akpọ Jean-Pierre Peugeot (Jean-Pierre Peugeot, 1768-1852), ụdị a na-ahụkarị bụ ụdị Z. Anyị chọpụtara na ụbọchị patent nke igwe ose a bụ 1842. N'oge patent ahụ, nwanne ya nwoke bụ Jean-Friedrich Peugeot anwụọla, yabụ anyị tụlere afọ nke imebe Ọ kwesịrị ịdị tupu 1822. Ọdịdị igwe nke igwe ihe ose. tupu patent na 1842 dịtụ iche, mana usoro nhazi ụdịdị Z nwere arụ ọrụ taa, na imebe ya agbanwebeghị nke ukwuu ruo ugbu a. Nke a bụ ihe nrụpụta ngwaahịa ama ama nke jigidere ụdị mbụ ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 200. atụ. Ụkpụrụ igwe ihe ose Peugeot dị mfe. Ọ bụ ogologo oghere oghere nwere igwe na-egwe ihe dị ka ihe dị na ala. A na -ejikọ ogwe igwe ihe na aka na njedebe nke ọkpọ ahụ. Ghichaa ya site na igwe grinder na ala. Ọ dị mfe ịgbakwunye, yabụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na -agaghị ekwe omume ịchepụta ngwaọrụ abrasive dị iche iche. N'ụzọ dị otu a, ejirila ya mee ihe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 200.
Igwe ihe ose Peugeot abụrụla otu n'ime ngwa nri na -erikarị nri na Western. Ụlọ ọrụ French Peugeot mepụtara ya. E nwere ọtụtụ nsụgharị dị iche iche, a ga -ahụkwa ya n'ụlọ nri ndị ọdịda anyanwụ n'ụwa niile. Maka onye nkịtị, igwe ihe na -esi ose n'ime ụlọ oriri na ọ restaurantụ isụ bụ ihe na -atọ ụtọ. Kemgbe imepụta na imepụta Peugeot, igwe ihe ose Peugeot abụrụla ngwa ga-enwerịrị n'ụlọ nri Europe na America.
Peugeot mechara rụpụta igwe ihe ọkụkụ nke ogologo na ụdị dị iche iche, wee mepụta igwe na-ere ose ose eletriki akpọrọ Zeli Electric Pepper Mill (Zeli Electric Pepper Mill), mana igwe na-acha osere nke izizi nwere Z nwere oke agụụ pụrụ iche. N'ebe ọdịda anyanwụ, ka ị na -etinyekwu uche na igwe ihe ọkụkụ kpochapụwo, ka ị na -achọkwu iweta ikuku nri mara mma.